राहुल गान्धीपछि अब को बन्ला भारतमा कांग्रेस अध्यक्ष? - Tulsipur Online
राहुल गान्धीपछि अब को बन्ला भारतमा कांग्रेस अध्यक्ष?
Posted by Admin | १९ असार २०७६, बिहीबार १३:४९ |
१९- असार / राहुल गान्धीले बुधबार चार पानाको पत्र सार्वजनिक गर्दै भने- म अब कांग्रेस अध्यक्ष रहिनँ ।
यसबाट अहिलेसम्म स्रोतलाई उद्दृत गर्दै अखबार र टेलिभिजन च्यानलहरुले लेखिरहेका समाचार पुष्टि भएको छ र गान्धी राजीनामा फिर्ता नलिनेमा अडिग छन्।
गान्धीले आफ्नो राजीनामा यसकारण सार्वजनिक गरे कि पार्टीले उनको राजीनामा अस्वीकार गरिरहेको थियो। कार्यसमितिमा उनी आफूले राजीनामा दिन्छु भन्थे । तर पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता उनलाई बारम्बार त्यसो नगर्न दबाब दिन्थे। तर उनले यसपटक राजीनामाको विषयलाई सार्वजनिक गरेरै छाडे।
अब कांग्रेससमक्ष नयाँ नेता चुन्नुसिवाय अर्को विकल्प छैन।
तर, कुन प्रक्रियाबाट अध्यक्षको चयन हुनेछ, त्यो आगामी समयले नै बताउनेछ। तर कांग्रेसको विधानले भन्छ– यस्तो स्थितिमा कांग्रेसका सबैभन्दा वरिष्ठ महासचिवले नै अस्थायी रुपमा अध्यक्षको जिम्मेवारी पनि निर्वाह गर्नेछन्।
यतिखेर कांग्रेसमा मोतीलाल बोहरा सबैभन्दा वरिष्ठ महासचिव छन्। अब सम्भवतः उनैले कार्यसमिति बैठक बोलाउनेछन्, जसले अध्यक्ष चयनको पार्टी कदम तय गर्नेछ।
चार पानाको राजीनामामा उनले लेखेका छन्,‘हामी आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीलाई तबसम्म हराउँन सक्दैनौं, जबसम्म हामी सत्ताको चाहना छाडेर एक ठूलो विचारधाराको लडाइँ लड्नेछैनौं।’
राहुलको यो इशारा पार्टी नेताहरु तथा आफ्नै लागि हो ।
परिस्थिति यस्तो बनेको छ कि अब नेहरु–गान्धी परिवारका कुनै पनि सदस्यले नेतृत्वको चुनावमा सक्रिय भूमिका निभाउनेछैनन्। यस्तो अवस्थामा नयाँ नेतृत्व सर्वसम्मतिले चयन हुनेछन् या पार्टीलाई एकजुट राख्न सक्नेछन् भन्ने प्रश्न पनि सिर्जना भएको छ।
यो प्रश्नको उत्तर राहुल गान्धीले दिनुपर्ने थियो।
राहुललाई मनाउने प्रयास अझै पनि जारी छ। यदि यो असफल भएमा उनको कार्यकाल समाप्त भएको मानिनेछ। उनको नेतृत्वमा पार्टीले तीन राज्य विधानसभाको चुनाव जित्यो। तर २०१९ को लोकसभा चुनावमा लज्जाजनक हार भयो।
लोकसभा निर्वाचनमा कांग्रेसको हारका दुई–तीन ठूला कारण छन् । त्यसमध्ये एउटा थियो बालाकोट प्रकरणको फाइदा भाजपाले लियो। तर कांग्रेसले जुन मुद्दा उठायो, त्यसलाई जनताले पत्याएनन्।
विश्लेषक कुलदीप मिश्र भन्छन्– राहुल आफैंले सोच्नुुपर्ने थियो कि यसमा आफ्नो गल्ती भयो कि भएन भनेर। तर पद छाड्नुअघि उनले उनले पार्टीलाई एक यस्तो ठाउँमा राख्नुपर्ने थियो, जहाँ पार्टीसँग एक नेता हुन्थे, दैनिक काम जारी रहन्थ्यो र एक नयाँ उद्देश्यसँग पार्टी अगाडि बढोस्, तर उनी यस्तो प्रक्रिया सुरु विना त्यत्तिकै हिडें।’
Previousको बन्छ लिग च्याम्पियन? एसएसफए र सक्सेस फाईनलमा भिड्ने
Nextयसकारण बन्छ दंगीशरण पर्यटनको केन्द्र